Association ANKIZY: "Ny asa fanasoavana tsy ijerena loko sy antoko" · déliremadagascar
ANKIZY (ANkohonana Kristianina Itsinjovana ny Zaza Ivoatra) sy ny LIFE ONG izay musulmans no betsaka amin’ireo mpikambana sy ny mpamatsy vola dia nanao asa Fizarana fanampiana ara-tsakafo in-telo teto Madagasikara.
Ny voalohany sy ny faharoa dia tany Toamasina hiatrehan’ireo « Silamo sahirana » ny volana Ramadany: » Opération Ramadan 2020 – 1 €-1 repas ». Tamin’ny faran’ny volana aprily dia 830 fianakaviana no novatsiana fanampiana ara-tsakafo ampy azy ireo mandritra ny iray volana. Tamin’ny 9, 10, 11 Mey kosa dia fianakaviana miisa 1000 sahirana avy amin’ny antokom-pivahana samihafa (Kristianina sy Silamo) no novatsiana fanampiana ara-tsakafo ampy azy ireo mandritra tapa-bolana.
Teto Antananarivo kosa ny fizaràna fahatelo nataon’ny association ANKIZY, noho ny fahitana ny fahasahiranan’ireo fianakaviana izay miankina amin’ny Renivohitra ny asa fitadiavana. « Aide alimentaire d’urgence – 1 €- 1 repas » toy ny natao tany Toamasinaihany izany.
Natao tany amin’ny fokontany Ambohibato Ambohimanambola ny fizaràna (fahatelo) ho an’Antananarivo, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Nambarany fa : « Ny tena tianay association ANKIZY sy LIFE ONG aseho sy hijoroana dia ny fanaovana asa fanasoavana dia tsy mila ijerena loko na antoko (fivavahana, politika, volon-koditra…) ary raha tsy misy ny kolikoly ary afaka manome ny sahaza fa tsy vonji-tavan’andro fotsiny na anaovana fampisehoana sy ahazoana laza sy dera.
Ireto misy sary vitsivitsy maneho ny fizarana, ny santionan’ireo fiainan’ireo olona nomena fanampiana…
Nanangona : Ony R